यौनिक रुपमा स्वतन्त्र नभएसम्म महिला स्वतन्त्र हुँदैनन् (तसलिमा नसरीनको अन्तरवार्ता ) - Ratopati
अन्तरवार्ताकार : नरेश ज्ञवाली
‘लज्जा’ उपन्यास मैले धरै वर्षअघि पढेको थिएँ । त्यसपछि अरु पनि केही पढियो र लेखिकाको नाम घोकियो तसलिमा नसरिन । तसलिमाको नाम तसल्लीका साथ लिन मिल्दैनथ्यो, किनभने यो नामसँगै उनको विद्रोह पनि गासिएर आउँथ्यो । कतिले उनको विद्रोहलाई होइन यौन पक्षलाई बढी प्रधानता दिन्थे र भन्थे– यो त निकै ‘छिल्लिएर’ लेख्छे, आइमाई होइन र ? यो त्यही कुरा थियो जुन नयाँ सोच्ने पुरुष लेखकलाई ‘अराजक’ र महिला लेखिकालाई ‘छिल्लिने’ भनेर भनिन्थ्यो/भनिन्छ ।
जो मिडियाका पछि दगुर्छन् उनीहरुको एकखाले मानसिकता विकास भैसकेको छ भन्नुको अर्थ ‘बे्रन वास’ भैसकेको छ । त्यसमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । महिलालाई उसको शारीरिक सुन्दरताका कारण महान ठानिनु हुदैन ।
त्यस्ता कुनै लेखक छन्, जसको नाम तपाईं गर्वका साथ लिन सक्नुहुन्छ ?
के तपाईंले यो उपमहादेशको कुरा गरिरहनु भएको छ ?
म उनको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु । मैले उनलाई सहयोग गरेँ र उनले पनि मलाई सहयोग गरेका थिए । तर त्यहाँ केही कुराहरु थिए ।कहिले काहीँ उनका व्यवहारहरु महिला मैत्री हँुदैन्थे । कहिलेकाहीँ म उनलाई महिलाप्रति हिंसा गर्नेकै रुपमा पाउछु, जो मलाई मन पर्दैन । म त्यसको विरोध पनि गर्छु । अहिले पनि उनले ट्विटरमा यस्तै महिला विरोधी केही कुराहरु लेखेँ, जुन मलाई मन परेन र विरोध गरेँ । मैले उनको विरोध गर्दा उनी कति ठूला लेखक हुन् भन्ने हेक्का राखी राख्न पर्दैन । यत्ति नै भएको हो ।